Umshini womshini wokushisela we-china jewelry china manufacturer I-Suntop
Imishini ye-Fibre Laser Cutting
Uchungechunge Lwetafula Olodwa
Okugcwele Kufakwe Ithebula Elibili Elishintshiwe
Uchungechunge Oluncane Lokusika
Umshini Wensimbi Namabhubhu Wokusika I-Laser
Laser Amashubhu Cutting Machine
Okuzenzakalelayo Laser Cutting Machine
Okuzenzakalelayo Laser Tube Cutting Machine
Ipulatifomu yokushintshanisa kabili ngaphandle kokuvalelwa
Ipulatifomu yokushintshaniswa okubili nge-Tube Cutting
Laser Ukumaka Machines
Fibre Laser Ukumaka Machine
Ephathekayo Mini Fibre Laser Ukumaka Machine
Umshini Wokumaka Ophathekayo we-Fiber Laser
Uhlobo lwaphansi Umshini Wokumaka Okugcwele we-Fibre Laser
Mini Smart Fibre Laser Ukumaka Machine
IKhabhinethi Uhlobo Fibre Laser Ukumaka Machine
Umshini Wokumaka we-Flying Laser
Umshini Wokumaka we-UV Laser
Umshini wokumaka we-CO2 Laser
Umshini wokumaka we-3D CO2 Laser
Kwenziwe ngentando Laser Ukumaka Machine
Umshini Wokumaka we-3D Fibre Laser
Imishini Yokushisela I-Laser
Okuzenzakalelayo Laser zokushisela Machines
Imishini Yokushisela I-Laser Ebanjwe Ngesandla
Imishini Yokushisela ye-3D Laser
Ubucwebe Laser Spot zokushisela Machine
Laser Cutting Futhi eqopha Machine
Umshini oqoshiwe we-3D Crystal Laser Inner
Umshini omncane oqoshiwe we-Crystal Laser Inner
Umshini Omkhulu Wokusika Ingilazi Yangaphakathi ye-Glass
Umshini We-Laser Acashile
Laser Consumables Futhi Izesekeli
Fibre Laser ugesi
Laser Cutting Shona
Laser Cutting umlomo wombhobho
Ilensi Yokuvikela i-Laser
Laser Cutting Izindandatho bobumba
I-YAG Laser Xenon-Lamp
Laser Crystal Induku
Ilensi Ehlanganayo Yomshini Wokusika we-Fiber Laser
Ukugxila Lens Ukuze Fibre Laser Cutting Machine
Ikhadi Lokulawula Ukumaka le-Laser
I-Fiber Laser Cutting Control Card
Isixhumi se-Laser Cutting Head
Ikhanda le-Laser Scanner
Fibre Laser Generator Ukuze Laser Ukumaka (RAYCUS)
Ubucwebe laser indawo Welding umshini
Ubucwebe indawo laser welding umshini isingeniso:
Lo mshini wenzelwe ngokukhethekile ubucwebe neminye imikhiqizo yensimbi emincane ukubona i-laser welding, ikakhulukazi okusetshenziselwa ukushisela insimbi yezinsimbi ezahlukahlukene.
I-Laser spot Welding iyisici esibalulekile se-laser material processing technology, enye yenqubo yokubona indawo iwelding conduction ezishisayo, okusho ukuthi indawo yokushisa kwemisebe ye-laser, ukushisa kobuso ekusakazeni kwangaphakathi ngokuqhutshwa kokushisa, ngokulawula ububanzi be-laser pulse, amandla, amandla aphezulu nokuphindaphinda imingcele, imingcele efana nokuncibilika kwezakhi, ukwakha ichibi elithile elincibilikisiwe.
Ngenxa yezinzuzo zayo ezihlukile, isetshenziswe ngempumelelo ekucubunguleni ubucwebe begolide nesiliva kanye nokushisela izingxenye ezincane nezincane.
Isimiso esisebenzayo sohlelo lokushisela i-laser deposition yi-welding technology enamandla aphezulu ezishisayo nendawo emaphakathi, engabhekana ngokuphumelelayo nokushisela nokulungiswa kwazo zonke izingxenye ezincane, nokwenzela ukusweleka kobuchwepheshe bendabuko be-argon arc welding ekulungiseni futhi Welding ebusweni emihle.
Imingcele emibili yokushiswa okushisayo kanye nokwelashwa ngemuva kugwenyiwe, okusindisa kakhulu umjikelezo wokukhiqizwa kwesikhunta.
I-Laser spot welder isetshenziselwa ukugcwalisa imbobo kanye nokushisela amabala okuhlobisa kwegolide nesiliva, futhi kungasetshenziselwa ukushisela okubandayo kwensimbi ephezulu ye-alloy, ukushisa okushisayo okwenziwe ngensimbi ephezulu, ithuluzi lensimbi ye-nickel, insimbi yebanga eliphakeme, ingxubevange yethusi, ithusi le-beryllium , ukuqina okuphezulu kwe-aluminium alloy, igolide, isiliva nezinye izinto zensimbi.
SUNTOP Ubucwebe indawo laser welding umshini izici eziyinhloko:
Umshini wonke ungabekwa kudeskithophu, ukwakheka kokupholisa amanzi okwakhelwe ngaphakathi, isikhala esincane.
Amandla, ukushaya kwenhliziyo, imvamisa, usayizi wendawo kungalungiswa ebangeni elikhulu, ukufeza imiphumela ehlukahlukene yokushisela.
Amapharamitha alungiswa ngenduku yokulawula embotsheni evaliwe, elula futhi esebenza kahle.
Ukusetshenziswa komgogodla we-ceramic condensing cavity waseBrithani, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukusebenza kahle kokuguqulwa kwesithombe, ukuvimbela impilo yomgodi (iminyaka eyi-8-10), impilo yesibani se-xenon izikhathi ezingaphezu kwezigidi eziyi-8.
Ihood ehambisanayo, isusa ukukhuthazeka emehlweni ngesikhathi sokusebenza.
Ngamahora angama-24 okusebenza okuqhubekayo, wonke umsebenzi womshini uzinzile.
Idizayini eyenziwe ngabantu, i-ergonomic, amahora amaningi okusebenza ngaphandle kokukhathala.
Izinzuzo eziphambili: isivinini esisheshayo, ukusebenza kahle okuphezulu, ukujula okukhulu, ukusonteka okuncane, indawo encane ethintekile ekushiseni, ikhwalithi ephezulu yokushisela, akukho ukungcola, ukusebenza kahle kakhulu nokuvikelwa kwemvelo.
Imingcele eyinhloko yomshini wobucwebe we-laser welding:
UMax. amandla e-laser 150W
Amandla we-Laser 1064nm
Ukusetshenziswa kwamandla okuphelele 5KW
Ukugxila kwe-Laser 110mm
Laser ishayela imvamisa repeatable ≤0.1-20Hz
Ukuvikelwa Kwamanzi TM 10-30 degree
Laser ishayela ububanzi ≤20ms
Laser ukuvikelwa igesi 1 indlela
Ukunikezwa kwamandla kagesi 220V / 50Hz / 20A
Ubukhulu 900 * 500 * 600mm
Isisindo sonke somshini 80KG
I real jewelry laser Welding isampula izithombe ukuze zisetshenziswe:
Langaphambilini Umshini ophethwe ngesandla we-fiber laser welding
Olandelayo: CO2 laser cutting futhi umshini oqoshiwe
ISuzhou Suntop Laser Technology Co., LTD
Hot Products-Ibalazwe-AMP Ucingo
Pipe Fibre Laser umsiki, Umshini Wokusika i-Fiber Laser, Umsiki we-Tube Laser, Umshini wokusika we-Tube Laser, Umshini Wokusika we-China Fibre Laser, Umshini Wokusika i-Fiber Laser Pipe,